Kan sameeyey libdhi Muqaal: Sida loo sameeyo libdhi ah gudaha / dibedda iyo Muqaal
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo libdhi ah gudaha / dibedda iyo Muqaal
Inkasta oo ay dadka ugu sameeyaan duubey ka baxeysa u soo bandhigeen on website, dadka isticmaala qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in doonayaan in ay daawadaan TV-ga ama qalabka la qaadi karo. Laba nooc oo duubey ka baxeysa soo bandhigay: Flash Gallery Factory loogu duubey ka baxeysa website iyo DVD Muqaal dhise u duubey ka baxeysa ee TV.
Maxaad samayn kartaa la slideshow ka baxeysa?
1. Muujiya photos aan xad lahayn oo la soo daadan gudaha / dibedda saamaynta.
2. Tiro balaadhan oo ka baxeysa ee / libdhi baxay saamaynta Doorashadaada.
3. Si fudud bedeli images ee Flash slideshow isticmaalaya XML aan dib-u-abuuris.
4. baxeysa customizable gudaha / dibedda mar.
5. wakhti bandhigay customizable ee image slideshow ka baxeysa.
6. links customizable u Flash kasta slideshow image.
Libdhi Muqaal ah ee Website
Flash ah ay tahay sida ugu fiican ee ay u Cudarada duubey ka baxeysa in website sababtoo ah daalacashada ugu soo la Flash Player si ay u ciyaaro. Marka slideshow ka baxeysa la abuuray Flash Gallery Factory, waxaad ka heli doontaa xeerka in Cudarada bogga internetka ah. Wax koobi-to-Jinka ah oo kaliya Waa. Eeg tallaabada ay hage user tallaabo halkan.
Halkan waxaa ku qoran tusaale slideshow ka baxeysa ee abuuray Flash Gallery Factory.
Hubi dheeraad ah arrimo slideshow ka baxeysa >>
Libdhi Muqaal ah ee Computer, Device iyo TV
Haddii aad tahay enthusiast sawir ah, waa u sahlan in ay wadaagaan shuqullada aad saaxiibo ama macaamiisha ee slideshow ka baxeysa ee computer, qalab ama TV a. Hoos waxaa ku slideshow ka baxeysa abuuray nooca sawiro la music soo jeeda. Waxa la abuuray oo leh DVD Muqaal dhise on desktop oo lagu shiidaa meel la wadaago laga yaabaa, oo ay ku jiraan Qalabka telefoonada gacanta. Halkan waxaa gundhig sida slideshow HTML5 , oo ay taageerayaan oo keliya HTML5 browser. Haddii aad ku aragto, hambalyaynayaa, aad leedahay mid ka mid ah horay. Nasiib wacan.